ယူကရိန်းအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့ အကြား တင်းမာမှုများ ဆက်ရှိနေ - Xinhua News Agency
ရုရှား-ယူကရိန်း နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တွင် တင်းမာမှုများ မြင့်တက်နေချိန်တွင် အမေရိကန်က တပ်ဖွဲ့ဝင် ၈,၅၀၀ အား တပ်ဖြန့်ထားနိုင်ချေရှိသည့်အတွက် အသင့်အနေအထား တပ်လှန့်ထားကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရုရှားနိုင်ငံက လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရန်စမှုနှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံ အပေါ် ရုရှားနိုင်ငံ ၏မူဝါဒ အချက်အလက်အလက်အမှား များ ထုတ်ပြန် မှု အပေါ် အပြစ်တင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အကြပ်အတည်းမှာ ထိန်းချုပ်နိုင်ချေရှိနိုင်မည်ဟုထင်မြင်မိပါလား။ ယခု ဗီဒီယိုထဲတွင် အမေရိကန်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့အကြားတင်းမာမှုများအားတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Amid escalating tensions on the Russia-Ukraine border, the U.S. has announced to put 8,500 troops on heightened alert for possible deployment. Meanwhile, Russia slammed U.S. provocation and false information about the country’s policy on Ukraine.
Will the crisis get further out of control?